Masakadza tries to force the pace after being bogged down, he gives the bowler the charge and ends up flat-batting it straight to Rohit at mid-off, he hops and takes the catch fairly easily	H Masakadza c Sharma b Dinda 2 (10m 8b 0x4 0x6) SR: 25.00	Zimbabwe
PP Ojha to Chibhabha,
the leg stump is down! Ojha tosses it up on middle and leg, Chibhabha exposes his stumps a bit in attempting a slog and misses it completely, timber and out	CJ Chibhabha b PP Ojha 7 (16m 17b 1x4 0x6) SR: 41.17	Zimbabwe
Yusuf take a bow! One of the better outfield catches you will see, Taylor gives the charge and aims to scoop that over the sight screen Yusuf gets across from long-on, runs to his left, leaps and cups it with both hands and falls and still holds on to the catch	BRM Taylor c Pathan b Mishra 27 (48m 33b 3x4 0x6) SR: 81.81	Zimbabwe
25* (18b 2x4)
the middle stump is flattened! Quick yorker honing in on the blockhole, as straight as it can get, Coventry makes room and loses his middle stump which goes back a couple of yards	CK Coventry b Dinda 28 (20m 13b 3x4 2x6) SR: 215.38	Zimbabwe
39* (34b 2x4)
Ashwin to Chigumbura,
Raina take a bow! Chigumbura tries to hit that into orbit over the on side, gets a top edge and Raina runs backwards from midwicket, doesn't take his eyes off and catches it, falls and still retains control of the ball, stunning effort, three men were chasing that	E Chigumbura c Raina b Ashwin 18 (6m 6b 1x4 2x6) SR: 300.00	Zimbabwe
42* (36b 2x4)